Tabaha lagu hagaajinayo waxqabadkaaga naqshadeeye | Abuurista khadka tooska ah
Talooyin lagu hagaajinayo waxqabadkaaga sida naqshadeeye
Naqshadeeye ahaan, waxaad u badan tahay inaad horayba uga soo gudubtay daqiiqaddaas oo aad gebi ahaanba joogtid diiradda saaray abuuritaanka mashruuc oo waxaad ku dambaysaa "inaad ka booddo" cunto ama laga yaabo inaad ku beddesho sandwich ama kafee, maxaa yeelay way ka dhakhso badan tahay oo waqti ku lumin maysid. Si kasta oo ay ahaataba, markii waqtigu dhaafo, cuntada oo la iska dhaafo ama la beddelo waxyaabo aan caafimaad qabin ayaa aakhirka saameyn ku yeelan doonta iyo wax u dhimaya waxqabadkaaga intii aan ku caawin lahaa.
Markaad ka fikirto, waxaan ku siin doonaa xoogaa tilmaamo ah oo kaa caawin doonin oo keliya inaad hagaajiso waxqabadkaaga markaad fulineyso Waxaan u shaqeeyaa sidii naqshadeeye, laakiin sidoo kale maalintaada maalin.
Kuwani waa tilmaamaha aad u baahan tahay si aad u hagaajiso waxqabadkaaga
1 Cunitaanka xoog saarista
2 Qiyaasta lagu taliyay ee kafeyn
3 Fiitamiinnada loogu talagalay caafimaadka indhaha
4 Cunnooyinka si loo wanaajiyo caafimaadka wadajirka ah
Cunitaanka xoog saarista
Ka bood boodida cuntada waxay yeelan kartaa cawaaqib, sida inay saameyn ku yeelato adiga waxqabadka maskaxda sababo la xiriira yaraanshaha gulukooska, taasoo dhalisa daal maskaxeed oo weyn.
Sababtaas awgeed iyo sida uu qabo nafaqeeye, waxaa ugu fiican in la cuno shan jeer maalintii, seddexdii saacadoodba mar oo aan midkoodna laga boodin. Lahaanshaha suurtagalnimada in la kala doorto miraha, khudaarta iyo miraha oo dhan, maaddaama kuwani ay yihiin ilaha ugu fiican ee gulukooska.
Qiyaasta lagu taliyay ee kafeyn
Koob leh 180ml oo bun ah ayaa yeelan kara 20-150mg oo kafeyn ah, iyadoo ku xiran hadba sida loo sameeyo. Sidoo kale, cabitaanno cusbooneysiin ah ayaa la bixiyaa Noocyo kaladuwan, 360 ml badanaa waxay leeyihiin inta udhaxeysa 23-71mg of caffeine.
La lagula taliyay qaddarka kafeega dadka waaweyn ee caafimaadka qaba, waxay u dhaxaysaa 400-450mg maalin kasta. Marka waxa ugu badan ee lagu taliyaa waa inta u dhaxeysa 3-4 koob oo kafee ah.
Fiitamiinnada loogu talagalay caafimaadka indhaha
Xaqiiqdii wax kasta oo sameeya shaqada naqshadeeyaha waxay u baahan yihiin aragtidooda.
Si kastaba ha noqotee, markaan da 'nahay, jirku wuxuu noqdaa dhib badan tahay soo nooleynta unugyada, taasoo wax weyn u dhimaysa caafimaadka indhaha, marka lagu daro inay saameyn ku yeelato tayada aragga.
Si kastaba ha noqotee, adoo cunaya cunto caafimaad leh, waxaa macquul ah in dib loo dhigo luminta tayada iyo yaree qodobada halista taasoo horseed u ah horumarinta cilladda isha ee qallalan, cataract iyo xumaanshaha da'da ee la xiriirta da 'macular.
Xalku wuxuu ka kooban yahay cunista macdanta, fiitamiinnada antioxidant-ka, omega-3 iyo zinc, marka dareenkan marka la eego, fitamiin isku-dhafan oo wanaagsan wuxuu noqon lahaa caawimaad weyn.
Cunnooyinka si loo wanaajiyo caafimaadka wadajirka ah
Waa sax jirka u xooji si uu u saxo qaabka, Maaddaama saxannada herniated iyo osteoarthritis ay soo saaraan xanuun weyn oo aan ku dhaafin "boomaato". Dareenkan, naqshadeeyayaashu waxay u soo jeesteen inay noqdaan koox khatar ah, maaddaama ay si joogto ah u sameeyaan dhaqdhaqaaqyo aan sax ahayn.
Sababtaas awgeed, way wanaagsan tahay in lagu amaahiyo adiga daryeelka jirka oo habboon, Daryeelka iyo ka caawinta cunista cunnooyinka qaarkood oo ku fiican kor u qaadista caafimaadka muruqyada iyo kala-goysyada labadaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Talooyin lagu hagaajinayo waxqabadkaaga sida naqshadeeye